I-Aberdeen City Center Executive 2 bedroom Apartment - I-Airbnb
I-Aberdeen City Center Executive 2 bedroom Apartment
436 okushiwo abanye
Ifulethi lami liseduze nenkaba yedolobha, izindawo zokudlela, isiteshi sesitimela, isiteshi samabhasi, i-Union Square. Uzoyithanda indawo yami ngenxa yendawo, imibhede ethokomele, nekhishi elifakwe kahle. Indawo yami ilungele izithandani, abantu abazihambela bodwa, abahambi bebhizinisi, kanye nemindeni (enezingane). Ifudumele, ithokomele futhi kulula ngempela ukuyinakekela. Ifulethi linefenisha ephelele futhi lihlelwe ngalinye ukuze libhekelele inani labantu abahlala kanye nokuthi izivakashi zingathanda kanjani ukusethwa kwemibhede.
Ifulethi lonke lihlelelwe izivakashi ngokuphelele. Izivakashi ezifika efulethini futhi zingenwa ngesikhathi esizifanela ngomunye wabanikazi. Izivakashi ziboniswa nxazonke zefulethi futhi zinikezwa ukuvakasha okusheshayo kwendawo. Ngemuva kokuqinisekisa ukuthi izivakashi zikhululekile ngefulethi sikushiya ukuze ujabulele ifulethi. Ukuphuma kulula kakhulu, vele ukhiye umnyango ngemuva kwakho bese ufaka okhiye ebhokisini lezinhlamvu.
4.88 out of 5 stars from 436 reviews
4.88 · 436 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-436
Ifulethi lihamba imizuzu embalwa ukuya kuyo yonke into emaphakathi ne-Aberdeen. Uma ushayela imoto yakho ingapakwa ngokuphephile endaweni yokupaka izimoto ngaphandle kwenkokhiso. Indawo yokupaka emgwaqweni kuleyo ndawo imvamisa ingu-£1.00 imizuzu engama-30!
Sikholelwa ekunikezeni izivakashi zethu indawo ephelele engenaziphazamiso futhi sizoxhumana kuphela uma sicelwa futhi sitholakala ngombhalo, umlayezo we-Airbnb noma ngocingo.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$312.